दुई वर्षअगाडी मदन–आश्रित स्मृति दिवसका दिन तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भयो । एकतापछि देशको ठूलो पार्टी भयो र पार्टीको नाम नेकपा राखियो । पार्टीलाई दुई पाईलटले हाँक्ने सहमति भयो । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टी ७० बर्षपछि झाङ्गियो ।
पार्टी एकता अगाडि एमाले र माओवादीले संसदीय निर्वाचनमा क्षेत्र बाँढेर चुनावी प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा भने एमाले एक्लै मैदानमा थियो तर, माओवादी चाहिँ काँग्रेससँग मिलेर एमाले सिध्याउने अभियानमा थियो ।
संयोग भनौं- २ वर्षपछि मदन–आश्रित स्मृतिकै दिनदेखि नेकपामा दरार देखिन शुरु भयो । जेठ ३ गतेपछि असार १५ गते मदन जयन्तीसम्म आईपुग्दा त दुई अध्यक्षबीच आरोप प्रत्यारोप उत्कर्षमै पुग्यो । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद मान्न तयार भएर एमालेमा पार्टी विलय गराएका प्रचण्डले मदन जयन्तीकै दिन अर्का अध्यक्ष ओलीलाई कटाक्ष गर्दै राजीनामा माग्न थाले ।
प्रचण्डको मागमा पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ रह्यो । मंगलबारको बैठकमा बोल्ने १८ मध्ये १७ जनाले त राजीनामा नै मागे । उनीहरुले ओलीले अराजनीतिक चरित्र देखाएको आरोप लगाए ।
उता, जनयुद्धको सबै उपलब्धिसँगै सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गको सपना स्वाहा बनाएर ओलीसँग कुम जोडेका प्रचण्डलाई ओलीले भारतको उक्साहटमा लागेर आफ्नो राजीनामा मागेको गम्भीर आरोप लगाईदिए । भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छ भनेर खुलेआम अन्तर्वार्ता दिने प्रचण्डलाई सायद ओलीको यो कुराले बिझायो । उनले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसँगै लिएर राजीनामा भारतले नभै आफुहरुले मागेको जवाफ फर्काए । दुई वर्षअगाडि झाङ्गिएको नेकपा यहाँसम्म आउँदा बाङ्गियो ।
२०५४ सालमा महाकाली सन्धि हुने ताका जसरी तत्कालीन एमाले विभाजित थियो अहिले मिलिनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ले नेकपा त्यस्तै अवस्थामा बाङ्गिन पुगेको छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र पार्टीमा समान हैसियतको अध्यक्ष बन्ने सपना चक्नाचुर भएपछि बाङ्गिएका प्रचण्ड अहिले नेपाल, खनाल र गौतमलाई साथ लिएर सिङ्गो पार्टीनै बङ्ग्याउने दाउमा छन् ।
एकतापछि झाङ्गिएको नेकपा नामको पार्टी अध्यक्ष ओलीको मपाईंत्व र अटेरीपन अनि प्रचण्डको धुर्त्याईं र चतुर्‍याईँले गर्दा बाङ्गिन थाल्यो । बाङ्गिएको पार्टी सोझ्याउन छाडेर नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेपछि अब नेकपा नाङ्गिन मात्रै बाँकी रहेको छ ।
केन्द्रमा दुई तिहाई नजिकको सरकार आफ्नै र ७ मध्य ६ प्रदेशमा पनि नेकपा कै सरकार हुँदा पनि सर्वहारा, गरीब, किसान, मजदुरको पक्षमा काम गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु, विवादित ठेकेदार, माफियासँग पार्टी नेताको नाम जोडिनु, कोरोना महाविपत्तिमा परेकालाई राहत दिन नसक्नुले सरकार सँगै पार्टी समेत नाङ्गिन थालेको छ ।
अझै पार्टी अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले सुरमा वा बेसुरमा कहिले बेसार, कहिले असारका कुरा गर्ने, कहिले औषधिका ट्याबलेटदेखि राष्ट्रपति भवनको कार्पेटसम्म कुरा गर्ने अनि मदनको साईकलदेखि राष्ट्रपतिको गाडीको कुरा गर्ने गर्दा नेकपालाई झाङ्गिन भन्दा बाङ्गिन र नाङ्गिन बल पुगेको देखिन्छ ।
नेकपाभित्र नयाँ पुस्ताले नेकपा झाङ्गिँदा देश बाङ्गिने र जनता नाङ्गिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । नेकपा झांगिनु भनेको मुट्ठीभर मानिसहरुको स्वर्ग स्थापना गर्दा करोडौं नागरिक घरको न घाटको हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पनि हो ।
तसर्थ, नेकपा भित्र कोही यस्तो पात्र छ भने अगाडी आउनेबेला भएको छ । केहि युवा नेताले भनेजस्तै ओली र प्रचण्डलाई हटाएर नेकपामा तेस्रो विकल्प खोज्न ढिला नगर्दा हुन्छ । यदि यसो हुन सक्तैन भने झाङ्गिएर पनि बाङ्गिएको नेकपा नाङ्गिन बेर लाग्दैन । सर्वाङ्ग नाङ्गो हुँदा पनि महाराजलाई साह्रै सुहाएको छ भन्दै पछाडि लाग्ने वा नयाँ विकल्पको खोजीगर्ने जिम्मा फेरी पनि नेकपाकै । महाराजको जो हुकुम !!!
पश्चिम बंगालमा चुनावी सरगर्मी शुरुः किन डराइरहेका छन् मोदी ?
लोकतन्त्रको ‘जतन’ गर्ने कि आफैं ‘पतन’ हुने हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
सन् २०२० लाई फर्केर हेर्दा…
बरमझियाको ‘पेडा’ मा कमरेडका लडीबुडी
संसद विघटनः ओलीले भरेको बन्दुक विद्याले पड्काइन्
गान्धी परिवारको नेतृत्वमा भारतीय कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउन गाह्रो छ
ब्लग, साझापोस्ट सिफारिस, साहित्य
एउटा कहिल्यै नलेखिने पुस्तकः अडानी आफ्टर गान्धी
भाले मेवाजस्तो नेकपाः न घाँस न फल, न दाउरा न मल
अस्ताए सोनिया गान्धी युगको आधारस्तम्भ
अलबिदा गौतम सर !
प्रियाले छोडिन् ओली समूह
इलाम, ५ माघ । नेकपाका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली डमरु बजाउँदै पद बाँढ्दै हिंडिरहेको बताएको बेला स्थानीय...
काठमाडौं, ५ माघ । अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वरिष्ठ नेताको पद नपाएका नेकपा नेता वामदेव गौतम अनौपचारिक रुपमा भने ‘वरिष्ठ नेता’...
१२ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षर पक्षहरु पुनः एकजुट हुनुपर्छः डा. भट्टराई
काठमाडौं, ५ माघ । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त...
साँझ छिप्पिँदै गर्दा यान्छी शीतनिवास छिरेपछि ….
काठमाडौँ, ५ माघ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पुनः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । राजदूत...
काठमाडौं, ५ माघ । प्रत्येक वर्ष ‘माघ ५ गते’ मधेश र देशमा ‘बलिदान दिवस’ मनाइन्छ । २०६३ सालको मधेश जनविद्रोहमा बलिदान गर्ने शहिदहरूको...
नेकपा फुटेको मौकामा कांग्रेसको हमला, नेकपाले मुख खोल्यो
एसपी यादव/सर्लाही, ५ माघ । सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिक्रम यादवले पालिकामा रहेको बजार सेडको सार्वजनिक भवन...
आन्दोलनको बीचमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा
फाइल फोटो काठमाडौं, ५ माघ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ । बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने...
संवैधानिक इजलासमा सुवास नेम्वाङले दिएको अभिव्यक्तिको चर्चा
काठमाडाैं, ५ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले...